Shariif Xasan oo socdaalay Itoobiya (Mxuxuu doonayaa?) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Shariif Xasan oo socdaalay Itoobiya (Mxuxuu doonayaa?)
Mareeg.com: Madaxweynaha Maamulka Koonfur-galbeed Soomaaliya, Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa saaka u socdaalay dhanka Addis Ababa ee dalka Itoobiya, wuxuuna halkaas joogi doonaa muddo 4 cisho ah.
Shariif Xasan oo ay wehlinayaan qaar ka mid ah xubnaha Golahiisa Wasiirada ayaa ka hor inta uusan dhoofin warbaahinta u sheegay inuu dowladda Itoobiya kala hadli doono arrimo ku saabsan xiriir dhinacyada ganacsiga iyo ammaanka oo si gaar ah u khuseeya maamulkiisa.
Xubnaha safarka ku wehliyay Shariif Xasan ayaa waxaa ka mid ah wasiirka amniga Koonfur-galbeed, C/fataax Ibraahim Geeseey iyo kan warfaafinta, Ugaas Xasan.
9-kii bishaan waxaa socdaal nuucaan ah Addis Ababab ku tegay madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas, kaasoo isaguna sheegay inuu Itoobiya kala soo hadlayo arrimo la xiriira horumarka iyo dagaalka ka dhanka ah Alshabaab.